राणाको निधनप्रति संघद्वारा दुःख व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो निवर्तमान अध्यक्ष एवं सिप्रदी ग्रूपका निर्देशक सौर्यशमशेर राणाको असामयिक निधनप्रति संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । भैंसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा बिहीवार मुटुको शल्यक्रियापछि स्वास्थ्यमा थप समस्या आएर भेन्टिलेटरमा उपचाररत राणाको आइतवार बिहान निधन भएको थियो ।
‘एक कुशल नेतृत्वकर्ताको निधनबाट संघले ठूलो अपूरणीय क्षति बेहोरेको छ,’ संघद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्व. राणाको अकल्पनीय तथा असामयिक निधनप्रति संघ गहिरो दुःख प्रकट गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।’
स्व. राणा १५ मार्च २०११ (१६औं साधारणसभा) देखि ६ अगष्ट २०१३ सम्म संघमा कार्यसमिति सदस्य, ६ अगष्ट २०१३ (१९औं साधारणसभा) देखि ७ सेप्टेम्बर २०१५ सम्म महासचिव र ७ सेप्टेम्बर २०१५ (२१औं साधारणसभा) देखि ७ नोभेम्बर २०१७ सम्म तथा ७ नोभेम्बर २०१७ (२३औं साधारणसभा)बाट ५ डिसेम्बर २०१९ सम्म दुई कार्यकाल अध्यक्ष थिए ।
संघमा विभिन्न पदमा रहेर लामो समय अतुलनीय योगदान पु¥याएका राणाको निधनले स्तब्ध तुल्याएको संघले बताएको छ । मृदुभाषी एवं स्पष्ट वक्ता राणाको कार्यकालमा नेपालका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका छाता संगठनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन लगायत नेपाली पक्षको हितमा उनको पहलकदमी महŒवपूर्ण रहेको संघको ठहर छ । साथै उनकै नेतृत्व तथा कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय पर्यटन संयुक्त कार्यदलको कार्यक्रमको पनि शुरुआत भएको संघले स्मरण गरेको छ । बेलायतबाट बिजनेश एड्मिनिस्ट्रेशनमा स्नातक गरेका राणाको मार्केटिङ विशेष दखल थियो । २०५३ सालदेखि सिप्रदी ट्रेडिङमा आबद्ध राणा लामो समयसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा थिए । तारा म्यानेज्मेन्टको प्रेसिडेन्ट समेत रहेका राणाका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।